Madaxweynaha Galmudug " Xukuumada Cusub Bulshada Rayidka Way ka…" – SBC
Madaxweynaha Galmudug " Xukuumada Cusub Bulshada Rayidka Way ka…"
Kulan aad u balaaran ayaa ka dhacay Hoteelka Embasy ee magaalada Gaalkacyo kaasoo looga wada tashanayay sidii ay bushada Galmudug uga qeeyb qaadan laheeyd dhisida golaha wasiirada dhawaan laga sugayo inuu ku dhawaaqo madaxweeyne Maxamed Axmed Caalin.
U horeeyn waxaa halkaasi ka hadlay madaxa ugu sareeya jaamacada mudug xuseen salaad waheliye asgoo u soo jeediya bulshada halkaasi isugu timid nieey yihiin dadka muhiimka ah ee la doonayo ineey biri bushada hogaamiyaan waxa uuna u mahad celiyay madaxweeynaha galmudug sida uu udoonayo inlahelo dad masuuliyad qaadikara bushdana wax u qabankara.
waxaa xigay oo halkaasi kahadlay masuulka u sareeya jaamacada gaalkacyo C/qaadir Maxamad Shirwac oo asna kahadlay ineey muhiimtahay wadatashiga ayna tahay tankaliya ee hormar lagu gaarikaro waxa uuna intaasi ku daray indadaalo looga baahan yahay dhamaan bulshad reer galmudug.
Waxaa Sidoo kale halkaasi ka hadlay Wasiirkii hore ee Iskaashiga iyo Xiriirka Caalamiga ah ee Galmudug Cumar Maxamed Maxamuud roobel Cumar suuri, Asagoona ugu horayn u mahad celiyay Madaxweynaha Galmudug, kala diridii Xukuumadii uu asaga ka mid ahaa taasi oo aan qaban wax yaabihii looga fadhiyay, Cumar Surri ayaa soo dhaweeyay Xil ka qaadistii lagu sameeyay, Waxa uuna ugu danbaytii baraarujin u jeediyay Bulshada madasha fadhisa in ay aayahooda ka tashtaan ayna la yimaadaan Dad wax u qaban kara ee matala.
Ugudanbeeyntii madaweeynaha ayaa makarafoonka lagu wareejiyay asgoo bulshadii halkaas isugu timid iyo ardooyinkii jaamacadaha, waxa uuna usheegay ineey haystaan waqti yar loogana baahanyaha ineey ciideey doonayaa sii fiigooda 24 saac ku So gudbiyaan sidoo kale madaxweeynuhu wuxuu ku baraarujiyay in uusan hadal wax tarin muhiimadu ay tahay waxqabad, Asagona hadalkiisa ku soo gaba gabeeyay in goor dhaw soo magacaabi doono Xukuumad cusub oo wax tar leh.
Sikastaba ha ahaatee hadalka madaxwenaha Galmudug ayaa ku soo beegmaya Xili dhawaan uu kala diray Dhamaan Wasiiradii iyo wasiiro ku xigeenadii Galmudug.